Ekoatera : Mandrahona ny firenena ny loza voajanahary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Marsa 2008 22:09 GMT
Sary nalain'i MennoGuy, arovan'ny Creative Commons
Na toa hadinodinon'ny mpanao gazety maro aza ny vokatry ny oram-be tany Ekoatera fa nirona tamin'ny olana diplomatika teo amin'i Colombia sy ny manodidina azy izy ireo, dia mbola maro no mijaly any an-toerana noho ireo loza voajanahary. Io sary eo ambony io dia nalaina tao Tosugua, tanana iray ao amin'ny faritanin'i Manabi, iray amin'ireo faritany 15 any an-toerana niharan'ny tondra-drano. Ny tena mahasahirana azy ireo moa araka ny nambaran'ny Filoham-pirenena dia sady tsy manana teti-bola natokana ho an'ny loza voajanahary tahaka itony ny governemanta, no sady efa tsy manam-bola rahateo izy ireo. Mitentina tapitrisa maromaro moa ny fahasimbana vokatr'ity safo-drano ity ary any 1 miliara dolara araka ny tombantombana no ilaina hanarenana ireo tanana tondraky ny rano. Very tamin'izany koa ny sakafo sy ny biby fiompy, ary araka ny voalaza dia olona 23 no maty. Atahorana amin'izao fotoana izao ny hihanahan'ny areti-mifindra toy ny tazomahery [dengue] amin'ireo toerana tratry ny tondra-drano ireo.
Araka ny haino aman-jery any an-toerana dia ny gorernemanta Espaniola sy ny Papa no nitondra fanampiana voalohany ho an'ireo tena voa mafy tamin'ity loza ity. Hisy fanadiovana rano hatsangana moa ao Guayas sy amin'ny morontsiraky Ekoatera hiarovana ny mponina amin'ireo toerana ireo amin'ny aretina isan-karazany. Nilaza moa ny olona avy ao amin'ny governemanta, tahaka ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitaiana ara-tSosialy [Minister of Economic and Social Inclusion (MIES)] Jeanneth Sanchez, fa “tsy vonjy maika intsony ity, fa efa loza mihatra amin'ny firenena”, ary nanasa ny hafa handray anjara ao amin'ny “Return the Happiness” amin'ny fanangonana sakafo sy fitafiana ho an'ireo tra-boina. Efa nanatevin-daharana amin'io “ady” io moa ny Megamaxi, Diners Culb International, ny INNFA (National Institute for Children and Families ) ary ny MIES.
Raha ny marina dia tsy ny tondra-drano ihany no atahorana hamely ny mponina fa ao koa ny loza voajanahary tahaka ny fipoahan'ny afotroa Tungurahua izay notanterin'i El Blog de Palulo [es] an-tsary. Ankoatra ny fampiasany twiter hizarana ny vaovao avy any Ekoatera, dia voalaza ao amin'ny lahatsoratra nosorany farany koa fa nitony ilay afotroa.
Fatratra ! Izay no zavatra voateniko voalohany tamin'ny nahita ny ranomandry nandrakotra ny Tungurahua, sy ny setroka avy eny. Fony mbola ankizy aho dia tsy nahagaga ny nahita ranomandry teny, fa amin'izao kosa, dia tena mahatalanjona ny mahita sary tahaka izao avy amin'ny afotroa efa hipoaka.
Noresahin'i Ecuador Periodistico [es] moa ny resaka ny Filoha Lefitra hankaherezana ny mponina ao Ekoatera.
Tsy hoe ratsy akory ilay hevitra fa tsy ara-potoana ! Mieritreritra aho hoe mety ho afaka mampiseho sary avy any amin'ny moron-tsiraka ve ny mpampiely vaovao. Ny olona mbola … mitsiky nefa efa eny an-tendany ny rano ! Amin'izay mba mampiseho olona manana herin-tsaina. Mila vonjy maika isika, faritany 15 tototry ny rano, olona 22 no maty ary efa ho 1 tapitrisa no maratra … Ka tsy maitsy mitsiky isika ! Mety ho tsara koa ny sarin'ny avy any Tungurahua feno lavenona sy ombivavy mitsikitsiky, milay e ? … omby vava be herin-tsaina, mbola mitsiky amin'ny loza mihatra !
Araka ny voalazan'ny gazety any an-toerana tahaka ny EAl Comercio, La Hora ary El Universo dia mbola mety haharitra iray volana mahery ity tondra-drano ity. Dia ahoana no fomba hiainan'ny mponina ao anatin'ny tsy fahasalamana noho ny fiangonan'ny moka mitondra malaria, dengue noho ny fiandronan'ny rano. Nampieritreritra an'i Don Xavier [es] amin'izay tokony ataon'ny haino aman-jery nasionaly. Araka ny voalazany mantsy dia toy tsy mampita vaovao izy ireo fa toa milalao tantara mampalahelo :
Tsy tokony ho alefa amin'ny fahitalavitra ve, ireo mandrakotra toerana maro kokoa, mba ahitan'ny olona rehetra hoe aiza no hahafahana mialokaloka, na miala ny lalana simba, na ny toerana voa mafy, na farafaharatsiny mba hahafantarana hoe aiza no aleha mba hahafahana mitahiry ny sakafo. Tsy mbola nahita mihitsy aho tamin'ny vaovao hoe nandeha nanampy ny olona difotry ny rano hatreny an-tendany ilay mpanao gazety. Dia aza miteny ahy hoe tsy isan'ny asany izany, fa amiko dia resaka MAHAOLONA fotsiny io. Toa tsotra ihany ilay izy nefa tsy mbola nisy nampiseho izany, ary isika samy mahafantatra fa azo ampiasaina daholo ny zavatra rehetra mba hananana toerana tsara, fa farafaharatsiny kosa aoka atao mazava sy tsy miangatra ny fampahalalam-baovao.
Mila fanampiana i Ekoatera, hanafatra vary 45000 taonina ny governemanta noho ny fahaverezan'ny vokatra, ary noho ny fitomboan'ny tsy an'asa dia mangataka fanampiana avy any ivelany. Raha afaka manampy ny olona amin'ny aterineto dia tena fotoana tsara izao hanaozana izany, ary raha afaka manampy ny governemanta hafa dia ankasitrahana hatrany ny fanampian'izy ireo.